केटा नपाएकै कारण अहिलेसम्म सिंगल छु : 'मोडल सुष्मा राई'
सुष्मालाई मोडल भन्ने कि मेकअप आर्टिस्ट ?
मोडलिङ र मेकअपमध्ये कुन मन पर्छ ?
हरेक मोडलको लक्ष्य फिल्ममा आउने हुन्छ नि ?
प्रेम, क्लब, चुरोट र रक्सीमा कतिको रुचि छ ?
कस्तो केटासँग प्रेम गर्ने चाहना हो त ?
यस्तो केटा पाइन्छ र ?